Shirkadda Shiinaha ee cufnaanta sare leh oo leh wasakh culus YF-Zcs 58 57 56 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. YUNFENG
Ku soo dhowow shirkadda ZIBO YUNFENG INDUSTRIAL CERAMICS CO., LTD
Taageerada emaylka zbyunfeng@yunfeng.cn
Wac Taageero +86 0533 5556936
Nadiif warqad nadiif ah
Nadiifi Joogtada Hoose
Nadiifiyaha Cufnaanta Mid
Nadiifiyaha cufnaanta sare
Alumina dhoobada dhoobada-mosaic-leben-leben
Qaybaha fuuq-baxa - sanduuqa nuugista
Xidho Khadka alumina ee dhoobada dhoobada ah
Alumina dhoobada loogu talagalay qaabeynta
Alumina koorta dhoobada-biiyaha
606 / 400L-nylon wax nadiifiye joogto ah oo hooseeya p ...
Kontaroolka Hydrocyclone, nadiifiye hooseeya koorta dhoobada
joogteynta sare-double-saabuun nadiifiyaha qashinka ...
350 Nadiifiye saxarka loogu talagalay Qalabka Dib-u-warshadaynta Qashinka
92% Alumina Dahaarka Birta Dahaarka birta ee laga ...
95% Dahaarka Alumina Dhoobada & Tuuboyinka Birta ah ...
Gasho alumina u adkaysta dhoobada dhabarka leh ee xusulka shan ...
qaybaha fuuq-celinta dhoobada, sameynta saxanka, sayaxa ...
heshiis cufnaanta sare leh wasakhda culus YF-Zcs 58 57 56
Nadiifiyaha Sare Saxarka Nadiifinta / Kalatagalaha Bakhaarka / Ciida Kaxaynta / Sand-Catcher Sifeynta sheyga: HD nadiifiyeyaashu waa balaastiyeyaal balaaran oo balaaran oo awood u leh inay ka baaraan dagaan dhowr boqol oo tan oo fiber ah maalintii. Ujeedada ugu weyn ee loo nadiifiyo cufnaanta sare waa in laga sooco wasakhyada culus iyo fiilooyinka ku jira hakinnada fiilooyinka biyaha ku jira .Tani waxay ka ilaalisaa qalabka durdurku inuu xirto xad-dhaafka iyo dhaawaca. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa soo kabashada fiber. Qalab nadiif ah oo cufnaanta sare leh oo labajibbaaran waa puri horumarsan ...
dhoobada: 92% / 95% 97% 99% alumina & ZTA
Nadiif Sare Saxarka Nadiifinta / Bakhaarka Bakaylaha / Ciida Ka-saarista / Sand-Qabashada
HD nadiifiyeyaashu waa nadiifiyeyaal balaaran oo balaaran oo awood u leh inay soo saaraan dhowr boqol oo tan oo fiber ah maalintii. Ujeedada ugu weyn ee loo nadiifiyo cufnaanta sare waa in laga sooco wasakhyada culus iyo fiilooyinka ku jira hakinnada fiilooyinka biyaha .Tani waxay ka ilaalisaa qalabka durdurku inuu xirto xad-dhaafka iyo dhaawaca. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa soo kabashada fiber.
Qalab nadiifiyaha cufnaanta sare leh oo laba jibbaaran waa qalab lagu nadiifiyo oo horumarsan, gaar ahaan sifaynta saxarka xaashiyaha qashinka si fiican, waa mid ka mid ah qalabka muhiimka ah ee dib-u-warshadaynta waraaqda qashinka lama huraanka ah. Waxay isticmaashaa fiilooyin kala duwan iyo saamiga wasakhda, sidaa darteed mabda'a ah kala-soocidda dhexe ee wasakhda culus ee ka soo baxda saxarka si loo nadiifiyo ujeeddooyinka saxarka. Qalabka isticmaalaya ballaaran, labadaba nadiifinta isku xoqidda saxarka. Kahor mashiinka sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa nadiifinta cull wasakh saxarka oo joogto ah.
Nadiifiyuhu waa mid fudud, raad yar, awood ballaaran, otomatiggu wuu khaldami karaa hawlgalka slagging fudud. Xiridda tubada tubbada, nadiif ah oo hufan, hal mar oo keliya iyada oo loo marayo nadiifiye nadiifiye ah, qalabka wax lagu qabadsiiyo mar dambe looma baahna dabo, lumis yar oo fiber ah. Duugga iyo nolosha dheer: wadid la'aan, dayactir la'aan, waxaa jira laba nooc oo otomaatig ah iyo buug-gacmeed.
Socod m3/ Min
Awoodda waxqabadka t / d
Nadiifiye joogto ah oo sarreeya ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro wasakhda yar iyo tan culus sida birta, ciddiyaha buugga, dambaska, ciidda, culletka iyo wixii la mid ah. Hadafka xoqida qalabka xoqida, nadiifinta saxarka iyo hagaajinta tayada ayaa la gaari doonaa.
1. Tuubada quudinta oo leh xagal u janjeera xaggeeda waxay sameyn doontaa xoog xoog leh oo qulqulaya qulqulaya si loo kala saaro wasakhda culus ee wax ku oolka ah.
2. Jirka Cone ayaa la korsadaa alumina xiran dhoobada adkaysiga taas oo hubineysa waqti faa'iido dheer.
3. Qaab-dhismeedka laba-koonku wuxuu yareeyaa luminta fiber-ka halka uu sare u qaado waxtarka kala-soocidda culus.
4. Waxaa gacanta ku haya nidaamka otomaatigga ah ee PLC, kuna xooji dadka iyo qalabka.
Hore: 133 Qalabka xoqida Cufnaanta Cufnaanta Yar, Shaashadda Cadaadiska
Xiga: Nadiifiyeyaasha gadaal waxay u kala duwan yihiin miisaanka yar (wax, caag, iyo dhejisyo kale.)
Nadiifiye Hufnaan Sare leh
Nadiif Sare Saxarka Nadiifinta
Mashiinka Xaashida Nadiifiyaha Cufnaanta Sare
Nadiifiyaha Cufnaanta Yar
Galbeedka Zichuan ee Liu watts Industrial Park, No.1. Zibo, Shandong, Shiinaha
+86 0533 5556936
Qalabka nadiifinta saxarka warqad desande ...
2019 magaalada Qaahira, Masar (mashiinka waraaqaha sameeya)